आजको राशिफल ( वि.सं. २०७७ माघ ८ गते, बिहीवार ) - Rastrakokhabar
आजको राशिफल ( वि.सं. २०७७ माघ ८ गते, बिहीवार )
८ माघ २०७७, बिहीबार ०९:००
पहिलेको उपलब्धिले उत्साह जगाउनेछ। नयाँ काम थालनी हुनेछ। सानो प्रयत्नले दिगो काम सम्पादन गर्न सकिनेछ। साथीभाइले सहयोग जुटाउनेछन्। धार्मिक तथा सामाजिक काममा मन जानेछ। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनेछन्। पेसा तथा व्यवसायमा फाइदा हुने समय छ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। मिहिनेतले जीवनशैलीमा समेत सुधार ल्याउन सकिनेछ।
रमाइलो समय छ। मानसम्मान प्राप्त हुनेछ। तर, मनोरञ्जनमा अलमलिँदा काममा पछि परिनेछ। लोकाचारका लागि आतिथ्य खर्चिलो बन्न सक्छ। वादविवादमा अघि नसर्नुहोला। धैर्यसाथ प्रयत्न गर्दा नयाँ परिवेशमा नयाँ काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। आफन्तबीच आत्मीयता बढ्नेछ। व्यावसायले रमाइलो यात्रा गराउन सक्छ। नयाँ जिम्मेवारी पनि प्राप्त हुनेछ।
रोकिएका काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ। आफ्नै प्रयासले अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। व्यापारलगायत आर्थिक लाभ हुने काममा जुट्नाले मनग्य फाइदा हुनेछ। प्रयत्न गर्दा सजिलै लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। मिहिनेतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ। भौतिक साधन जुट्नाले फाइदा हुने काम सुरु हुनेछ। प्रतिस्पर्धीहरू किनारा लाग्नेछन् भने द्वन्द्व र मुद्दामा पनि आफ्नो पक्ष सबल बन्नेछ।
अध्ययन र पेसामा प्रगति गर्ने समय छ। विद्यार्थीहरूका लागि विशेष उपलब्धि हासिल हुनेछ। मिहिनेतले सफलताको उचाइमा पुर्याउन सक्छ। पहिलेको कमजोर नतिजा पनि सच्याउन सकिनेछ। व्यापार-व्यवसायमा पनि राम्रो फाइदा हुनेछ। तत्कालको निर्णयले नयाँ काम सुरुवात हुन सक्छ। शुभचिन्तकहरूले साथ दिने हुँदा लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ।
साथीभाइ जुट्नाले काममा उत्साह जाग्नेछ र चाँडै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। दिगो काम बन्नुका साथै विशेष उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। सेवामूलक काम सम्पादन हुन सक्छ। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनेछन्। मिहिनेतले सफलताको उचाइमा पुर्याउन सक्छ। प्रयत्न गर्दा नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ। पराक्रम बढ्नेछ र प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न पनि सकिनेछ।
Previous Post	प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमा आज पनि सुनुवाइ
Next Post	भारतले अनुदानमा दिएको कोरोनाविरुद्धको १० लाख डाेज खोप आज आइपुग्दै
आजको राशिफल (वि.सं. २०७८ बैसाख ७ गते, मंगलबार )
७ बैशाख २०७८, मंगलवार ०७:००
आजको राशिफल (वि.सं. २०७८ बैसाख ६ गते, सोमबार )
६ बैशाख २०७८, सोमबार ०७:००
आजको राशिफल (वि.सं. २०७८ बैसाख ५ गते, आइतबार )
५ बैशाख २०७८, आईतवार ०७:००